ဘုရားသခင်၏အသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်း God’s New Creation Lesson 5
အဓိကကျမ်းပုဒ် ။ ။ ၂ကော ၅း၁၇
ဖတ်ရန်ကျမ်းစာ ။ ။ ၂ကော အခန်းကြီး ၅၊ ကော ၁း၁-၁၉ ၊ ဧဖက် ၂း၁-၁၀
ယေရှုခရစ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်၌အသေခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ရွေးနှုတ်ခြင်းကိစ္စကို ပြီးစီးအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် သားတော်ကိုဂုဏ်ပြု၍ စကြ၀ဠာရှိတခုတည်းသော ပလ္လင်တော်အားပေးအပ်ခြင်း ဖြင့် ချီးမြှောက်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်ကို “ခပ်သိမ်းသောအရာတို့၏သခင်” ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဘုန်းတော် ထင်ရှားသော လူသားယေရှုခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးပေါ်၌ တန်ခိုးအာဏာအပြည့်ရှိသူဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏မိသားစုအသစ်၏ ဦးစီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်တော်ကို ခပ်သိမ်းသောအရာတို့၏သခင်ဖြစ်စေရုံမက မိသားစုအသစ်တခု ဖြစ်သော “ဘုရားသခင်၏သားသမီးများ” ၏ ဦးစီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဇာတိပကတိအတိုင်းမွေးဖွားစဉ်က ကျွန်ုပ်တို့သည် အာဒံ၏ အပြစ်သားမိသားစုအတွင်း၌သာရှိခဲ့ကြသည်။ အာဒံသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးခေါင်းဖြစ်ပြီး အာဒံ၏ အပြစ်သားဇာတိနှင့် သူလုပ်ခဲ့သမျှသောအရာအားလုံးတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့မျှဝေခံယူကြရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ိညာဉ်ရေးအရမွေးဖွားခြင်းကို ခံယူ သောအခါတွင်မူ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အံ့ဖွယ်ကောင်းသော အရာတခုကိုပြုလုပ်ပေးသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အာဒံ၏အပြစ်သားမိသားစုထဲမှ ခေါ်ထုတ်၍ ခရစ်တော်၏ မိသားစုအတွင်းသို့ သွင်းပေးသည်။ ယခုတွင်မူ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဦးစီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး သူ၏ဖြစ်တည်ခြင်းနှင့် သူလုပ်ခဲ့သမျှသောအရာအားလုံးတို့ကို ကျွန်ုပ် တို့ မျှဝေခံယူကြသည်။
ဘုရားသခင်၌ ကမ္ဘာပေါ်တွင်မိသားစုအသစ်တခုရှိရုံမက ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်တခုလည်းရှိသည်။ ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ အသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်း၏အစဖြစ်ရုံမက ဦးခေါင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းသည် အပြစ်ကြောင့်ပျက်စီးခဲ့ရသည်။ စာတန်ကို လောက၏အရှင်သခင် ဟု ခေါ်ကြသည်။ အကြောင်းမှာ သူသည် ရမ္မက်၊ လောဘနှင့် အာဏာပေါ်တွင် အခြေခံထားသော ကမ္ဘာလောကကြီး၏ စည်းစံနစ်များ၊ မူဝါဒများ၏ မမြင်နိုင်သော အုပ်စိုးသူဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျမ်းစာက ယေရှုခရစ်တော်သည် “ငါတို့အဘတည်းဟူသော ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီ ဆိုးညစ်သော ဤပစ္စုပ္ပန်ကာလမှ ငါတို့ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းငှါ၊ ငါတို့အပြစ်ကြောင့် ကိုယ်ကိုကိုယ်အပ်ပေးတော်မူ၏။” ဟုဆိုသည်။ (ဂလာ ၁း၎)
ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ရန်အတွက် ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ရှိရာ အပြစ်နှင့်ပြည့်လျက်ရှိသော ကမ္ဘာပေါ်သို့ ကြွဆင်းလာခဲ့သည်။ သူသည် အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သော်လည်း ကားတိုင်ထက်၌ ကျွန်ုပ်တို့နေရာကိုယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို သူ့ပေါ်တွင်စုပုံတင်ထားခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူသေ၍မြှုပ်နှံခြင်းကိုခံပြီး ၃ရက်မြောက်သောနေ့တွင် ဘုန်း ထင်ရှားသော ကိုယ်ခန္ဓာအသစ်ဖြင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်။
တနည်းအားဖြင့် သူသည် ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်ဖြစ်သော အသစ်စက်စက် ၀ိညာဉ်ကမ္ဘာအတွင်းသို့ ထမြောက်အသက်ရှင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် ဤကမ္ဘာလောကအတွင်း၌ မရှိတော့ပါ။ ဘုရားသခင်၏အသစ်သော ဖန်ဆင်းခြင်း၏မူလအစဖြစ်လာရုံမက ဦးစီးခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျမ်းစာက “အရာရာ၌ ထူးမြတ်ခြင်းငှါ မူလအရင်းဖြစ်၍၊ သေသောသူတို့တွင် သားဦးဖြစ်တော်မူ၏” ဟုဆိုထားသည်။ (ကော ၁း၁၈)
ဘုရားသခင်၏ကြီးစွာသောကယ်တင်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကို သေချာစွာနားလည်ခံစားနိုင်ရန်အတွက် ကယ်တင် ခြင်းမခံရမီက ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေကို ပြန်လည်စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် မြော်လင့်ချက် ကင်းမဲ့လျက် ရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေအနေကို ကြည့်သောအခါ ဘာကိုမြင်သနည်း။ အရာ ၃ ခုကိုသူမြင်သည်။
၁။ သူသည် ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များကိုမြင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သောအရာဖြစ်သည်။
၂။ သူသည် ကျွန်ုပ်၏အပြစ်သားဇာတိကိုမြင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အပြစ်သားဇာတိဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည် အပြစ်သားတယောက်ဖြစ်သည်။
၃။ သူသည် အပြစ်နှင့်ပြည့်လျက်ရှိသော ကမ္ဘာလောကအတွင်းရှိ ကျွန်ုပ်ကိုမြင်သည်။ ကျမ်းစာက “မကောင်းမှုဖြင့်ပြည့် လျက်ရှိသော လက်ရှိကမ္ဘာ” ဟုဆိုထားသည်။
ယခုတွင် ထိုအရာသုံးခုနှင့်ပတ်သက်၍ ဘုရားသခင် မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။
ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်၏အဖိုးထိုက်တန်လှသော အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်အပြစ်ပြသနာကို ဖြေရှင်း သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်တည်းဟူသော အသက်ကယ်ဆေးဝါးတခုတည်းသာရှိ သည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် သူ၏အဖိုးထိုက်သော အသွေးတော်ကို သွန်းခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များသည် လွှတ်ခြင်းခံရသည်။ ကျမ်းစာက “ဘုရားသခင်၏သားတော် ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည် ငါတို့အပြစ် ရှိသမျှကို ဆေးကြောတော်မူ၏။” ဟုဆိုသည်။ (၁ယော ၁း၇)
ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်သို့ကျွန်ုပ်အားသွင်းခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်၏အပြစ်သားဇာတိပြသနာကို ကိုင်တွယ်ဖြေ ရှင်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် အသက်ကယ်ဆေးဝါးတခုတည်းသာရှိသလို ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်သားဇာတိ အတွက် လည်း အသက်ကယ်ဆေးဝါး တခုတည်းသာရှိသည်။ ထိုအသက်ကယ်ဆေးဝါးမှာ “သေခြင်း” ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်က “ပြစ်မှားသော ၀ိညာဉ်သည် အသက်သေရမည်” ဟုပြောထားသည်။ (ယေ ၁၈း၎)
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်၏အပြစ်သားဇာတိပြသနာကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသနည်း? ကားတိုင်ထက်ရှိ ခရစ်တော်အတွင်းသို့ကျွန်ုပ်အားထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တွယ်ဖြေရှင်းသည်။ ကျမ်းစာက “ထိုဘုရားသခင်အားဖြင့် သင်တို့သည် ယေရှုခရစ်၌တည်နေကြ၏။” ဟု ပြောထားသည်။ (၁ကော ၁း၃၀)
ဘုရားသခင်သည် ကားတိုင်ထက်ရှိ ခရစ်တော်အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ “လူဟောင်း” အပြစ်သား ဇာတိသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ကားတိုင်ထက်၌ အသေသတ်ခြင်းကိုခံရသည်။ ခရစ်တော်သေသောအခါ သူနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့လည်းသေသည်။ ကျမ်းစာက “ထိုမှတပါး၊ ငါတို့၏လူဟောင်းသည် ထိုသခင်နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေ သတ်ခြင်းကို ခံပြီဟု ငါတို့သိကြ၏။” ဟုဆိုသည်။ (ရောမ ၆း၆)
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကားတိုင်ထက်၌ ခရစ်တော်နှင့်အတူ မည်သို့အသေခံနိုင်မည်နည်း။ ဤအရာကို ပုံဥပမာတခုဖြင့် ရှင်းပြပါက နားလည်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ စာရွက်တရွက်ကိုယူ၍ လူပုံလေးတပုံရအောင် ပုံဖော်၍ ညှပ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် ထိုလူပုံလေးကိုယူ၍ စာအုပ်တအုပ်ကြားထဲ ညှပ်လိုက်ပါ။ ထိုလူပုံလေးသည် စာအုပ်ထဲတွင် ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် စာအုပ်ကိုယူ၍ စားပွဲပေါ်သို့ တင်လိုက်သည်ဆိုပါစို့။ လူပုံလေးဘယ်ရောက်သွား မည်နည်း? ထိုလူပုံလေးလည်း စားပွဲပေါ်တွင်သာရှိမည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ စာအုပ်အတွင်း၌ ထိုလူပုံလေး ရှိနေသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စာအုပ်ကို ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ချထားလိုက်သည်ဆိုပါစို့။ လူပုံလေး ဘယ်နေရာမှာ ရှိနေ မည်နည်း။ ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင်ရှိနေမည်။ စာအုပ်ကို စန္ဒယားအပေါ်တင်လိုက်သည် ဆိုပါစို့။ ယခု ထိုလူပုံလေး ဘယ်မှာ ရှိမည်နည်း။ ထိုလူပုံလေးသည် စန္ဒယားပေါ်တွင်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လူပုံလေးညှပ်ထားသောစာအုပ်ကိုထုပ်ပိုး၍ အခြားနိုင်ငံတနိုင်ငံသို့ ပို့လိုက်သည်ဆိုပါစို့။ ထိုလူပုံလေးဘယ်ရောက်သွားမည်နည်း။ စာအုပ်ထဲ၌ ထိုပုံလေးရှိသောကြောင့် အခြားနိုင်ငံသို့ စာအုပ်နှင့်အတူ ရောက် သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် စာအုပ်ကိုယူ၍ ရေထဲနှစ်လိုက်သည်ဆိုပါစို့။ ထိုလူပုံလေး ဘာဖြစ်သွားမည် နည်း။ ရေအောက်ထဲရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ စာအုပ်၌ ဖြစ်သမျှအရာအားလုံးသည် လူပုံလေး၌လည်းဖြစ်ပျက်သည်။ အကြောင်းမှာ လူပုံလေးသည် စာအုပ်အတွင်း၌ ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်သောအခါ ခရစ်တော်အတွင်းသို့ ကျွန်ုပ်တို့ကိုထည့်သွင်းလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်၌ ဖြစ်ပျက်သမျှ အရာအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၌လည်းဖြစ်ပျက်သည်။
ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဖန်ဆင်ခြင်းအသစ်ထဲသို့ ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ဆောင်လာသည်။
ယခုတွင် သမ္မာကျမ်းစာထဲရှိ အံ့သြ၀မ်းမြောက်ဖွယ် အကောင်းဆုံးအမှန်တရားများထဲမှ တခုစီကို ကျွန်ုပ်တို့ ကြည့်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းမှ အသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်းအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းသွား သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်းသူနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ ဤအရာသည်ဘာကြောင့်မှန်ကန်သနည်း? ကျွန်ုပ်တို့ သည် ခရစ်တော်အတွင်း၌ရှိသောကြောင့် ဤအရာသည် မှန်ကန်ခြင်းဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်သည် သေဆုံးသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့လည်း သူနှင့်အတူသေသည်။ သူသည်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့လည်း သူနှင့်အတူ မြုပ်နှံခြင်းကိုခံသည်။ သူသည် ထမြောက်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့လည်း သူနှင့်အတူ ထမြောက် သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ သေခြင်းအားဖြင့် ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းထဲမှ ထွက်ခွာနိုင်ခဲ့သည်။ ဘုရား သခင်၏ အသစ်သော ဖန်ဆင်းခြင်းအနေဖြင့် ခရစ်တော်သည် ထမြောက်သောအခါ ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ် အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့လည်း ခရစ်တော်နှင့်အတူထမြောက်သည်။ ကျမ်းစာက “လူမည်သည်ကား ခရစ်တော်၌ရှိလျှင် အသစ်ပြုပြင်သောသတ္တ၀ါဖြစ်၏။ ဟောင်းသောအရာတို့သည် ပြောင်းလဲ၍ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် အသစ်ဖြစ်ကြပြီ။ ” ဟုဆိုသည်။ (၂ကော ၅း၁၇)
ဤကျမ်းပိုဒ်၏ ပထမစာကြောင်းကို ပိုမိုတိကျစွာ ဘာသာပြန်ပါက “တစုံတဦးသည် ခရစ်တော်အတွင်း၌ ရှိပါက ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်တခုဖြစ်လာသည်” ဟုဘာသာပြန်ရပေမည်။
ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ အသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်း၏ဦးခေါင်းဖြစ်၍ ခရစ်တော်အတွင်း၌ရှိသူ မည်သူမဆို ဘုရားသခင်၏ အသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်း၌ သတ္တ၀ါသစ် (လူသစ်) ဖြစ်လာသည်။ ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ အသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်း၌ လူသစ်များဖြစ်သည်ကို သိခြင်းထက် သာ၍အရေးကြီးသောအရာမရှိပါ။ ကျမ်းစာက “ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ငါတို့ကို ထမြောက်စေ၍ ကောင်းကင်အရပ်၌ နေရာပေးတော် မူပြီ။”ဟုဆိုသည်။
ဘုရားသခင်၏ အသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာမှာ အဘယ်နည်း? ကျွန်ုပ်တို့၏ နေရာမှာ ခရစ်တော်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်အတွင်း၌ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်သေသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ့အတွင်း၌ရှိပြီး သေခြင်းမှသူထမြောက်သောအခါတွင်လည်း ကျွန်ုပ် တို့သည် သူ့အတွင်း၌ရှိသည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏အသစ်သော ဖန်ဆင်းခြင်း၌ ဦးခေါင်းအနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏ လက်ျာတော်ဘက်၌ ချီးမြောက်ခြင်းကိုခံရသောအခါတွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့အတွင်း၌ရှိသည်။ ကျမ်းစာက “သို့သော် လည်း ကရုဏာတော်နှင့် ကြွယ်ဝတော်မူသော ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသော မဟာမေတ္တာတော်အားဖြင့် ဒုစရိုက်အပြစ်၌ သေလျက်ရှိနေသော ငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူ အသက်ရှင်စေတော်မူပြီ။ ကျေးဇူးတော်ကြောင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ၏။” ဟုဆိုထားသည်။ (ဧဖက် ၂း၎-၆)
ပထမပိုင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာမှာ “ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်း၌ရှိသောအသက်တာဟောင်း” ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့၏အသက်တာ၏ပထမပိုင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့မွေးဖွားလာချိန်မှစတင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ၏ ပထမပိုင်းတွင်ဘာရှိသနည်း? ဤအပိုင်း၏စာမျက်နှာများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များ နှင့်ရှုံးနှိမ့်မှုများအားဖြင့် ပြည့်နှက်လျက်ရှိသည်။ သို့သော် ခရစ်တော်နှင့်အတူ အသေခံခြင်းအားဖြင့် ဤသမိုင်းစာမျက်နှာ များကို အဆုံးသတ်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကားတိုင်ထက်ရှိ ခရစ်တော်အတွင်းသို့ ကျွန်ုပ်တို့ကိုထည့်သွင်းသည်။ သူသေသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့လည်းသေသည်။ ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းထဲရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာဟောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ခရစ်တော်နှင့်အတူ အသေခံခြင်း အားဖြင့် အဆုံးသတ်သွားပြီ ဖြစ်သည်။
ဒုတိယပိုင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသည် ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်ထဲရှိသော အသက်တာသစ်ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ိညာဉ်ရေးအရ မွေးဖွားသောအခါ ဤဘ၀စတင်လာသည်။ ခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှ ထမြောက် သောအခါ အသစ်သောဘ၀၌ ကျွန်ုပ်တို့လည်း သူနှင့်အတူထမြောက်သည်။ သူသည် ကောင်းကင်ပေါ်ပြန်တက်သွား သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့လည်းသူနှင့်အတူတက်သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏ လက်ျာတော်ဘက်ရှိ သူ၏နေရာကို ရယူသော အခါ ကျွန်ုပ်တို့လည်း သူနှင့်အတူ ထိုနေရာ၌ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်တာသစ်ကို စတင်အသက်ရှင်ရန် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ခရစ်တော် နှင့်အတူ နေရာချထားခြင်းကိုခံရသည်။ ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသစ်သော “စမှတ်” (Starting Point) ဖြစ် သည်။ ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စစ်မှန်သောဝိညာဉ်ရေးရာ နေရာလည်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤပုံစံ အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ကို ကြည့်မြင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ၏ ဒုတိယပိုင်း၌ ဘာတွေရေးထားသနည်း? ဤအပိုင်း၏စာမျက်နှာများသည် ခရစ်တော်၏ ပြီးပြည့်စုံမှုများနှင့် ခရစ်တော်ရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာများအားဖြင့် ပြည့်နှက်နေသည်။ ဤအပိုင်းသည် ဘယ်တော့မှ ပြီးဆုံးမည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ထာဝရအုပ်စိုးခွင့်ရကြမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကရော? ထိုအပြစ်များသည် ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းနှင့်သာသက်ဆိုင်ပြီး ခရစ်တော်၏ သေခြင်းအားဖြင့် ထာဝရပျေက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏အပြစ်သားဇာတိကရော? ဤအရာသည်လည်း ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပြီး ကားတိုင် ထက်၌ ကျွန်ုပ်၏ အသက်တာဟောင်းသည် အဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်သည်။
“ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းကရော? ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းသည် ယခုတွင် မပျောက်ကွယ်သွားသေးပါ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်သည် ဤအရာ၏ အစိတ်အပိုင်းတခုမဟုတ်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းကို စွန့်ခွာ၍ ဘုရားသခင် ၏ အသစ်သောဖန်ဆင်းခြင်းအတွင်းသို့ ကူးမြောက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ယေရှုက “ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူကို ယုံကြည်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကို ရသည်ဖြစ်၍ အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရ။ သေခြင်းမှ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်သောသူဖြစ်၏။” ဟုဆိုထားသည်။ (ယော ၅း၂၄)
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူသေခြင်းအားဖြင့် အပြစ်နှင့်သေခြင်းစိုးစံရာ ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းမှ အသစ် သို့ ကူးမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ထမြောက်စေခြင်းကို ခံရသောအခါ ဖန်ဆင်းခြင်း အသစ် ဖြစ်သော ထမြောက်သောအသက်တာတွင်းသို့ ၀င်ရောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် “သေခြင်းမှအသက်ရှင်ခြင်းသို့” ကူးမြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇာတိပကတိဘက်၌ရှိသည်ဟုဆိုသည်။ ဖန်ဆင်းခြင်း အသစ်တွင်မူ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ိညာဉ်ပကတိဘက်၌ရှိကြသည်။ ဒုတိယအကြိမ်ဖွားမြင်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇာတိ ပကတိဘက်ကို စွန့်ခွာ၍ ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်ဖြစ်သော ၀ိညာဉ်ပကတိဘက်သို့ ၀င်ရောက်လာကြသည်။ ကျမ်းစာက “သို့သော်လည်း၊ ဘုရားသခင်၏ ၀ိညာဉ်တော်သည်၊ သင်တို့အထဲ၌ ကျန်းဝပ်တော်မူလျှင်။ သင်တို့သည် ဇာတိပကတိဘက်၌ရှိကြသည်မဟုတ်၊ ၀ိညာဉ်ပကတိဘက်၌ ရှိကြ၏။ (ရော ၈း၉)
ယခုအချိန်တွင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကြည့်သောအခါ ဘာကိုသူမြင်သနည်း? သူ၏ ဖန်ဆင်းခြင်း အသစ်၌ရှိသော လူသစ်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုမြင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ ဘယ်ရောက်သွားသနည်း? ထာဝရ ပျောက် ကွယ်သွားပြီဖြစ်သည်။ “အပြစ်သား” လည်း ဘာဖြစ်သွားသနည်း? သူသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ ကားတိုင်ထက်၌ အသေ သတ်ခြင်းကိုခံ၍ ခရစ်တော်နှင့်အတူ မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ အပြစ်နှင့်ပြည့်လျက်ရှိသော ကမ္ဘာလောကကြီး ဘာဖြစ်သွားသနည်း? ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။ သို့သော်လူသစ်များအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကမ္ဘာလောကကြီး၏ အစိတ်အပိုင်း တခုအနေဖြင့် မပါဝင်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်ထဲ၌ ရှိကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သက်၍ အထက်ပါအရာများသည် မှန်ကန်သည်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော် အတွင်း၌ ထာဝရကာလ ရှိနေမည် ဖြစ်သည်။
သင်သည်ခရစ်တော်နှင့်ထာဝရဆက်သွယ်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်အတွင်း၌ ရှိသော သူများအနေဖြင့် အမြဲတမ်းကျွန်ုပ်တို့ကိုကြည့်သည်။ အခြားပုံစံမျိုးဖြင့်ဘယ်တော့မှ မကြည့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်၌ ထာဝရကာလ ခရစ်တော်နှင့် တလုံးတ၀တည်း ဖြစ်ကြသည်။
ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူများဆိုသော လူတစုရှိသည်။ ထိုလူစုသည် ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်ဆီသို့ ခေါ်ဆောင်ခြင်းခံရသော်လည်း အချိန်အတိုင်းအတာတခုအထိ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဤကမ္ဘာလောက၌ရှိနေသော်လည်း ကမ္ဘာလောကနှင့် မသက်ဆိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြသည်။
ယေရှုသည် နတ်ဆိုးများကိုအောင်နိုင်သော အခွင့်တန်ခိုးကို တပည့်တော်တို့အားပေးခဲ့သော်လည်း နတ်ဆိုးများ ကို အောင်နိုင်သောအခွင့်တန်ခိုး၌ ၀မ်းမမြောက်ရန်ပြောခဲ့ပြီး “သင်တို့၏နာမည်များသည် ကောင်းကင်စာရင်း၌၀င်သည်ကို ၀မ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလော့”ဟု ပြောခဲ့သည်။ (လု ၁၀း၂၀)
အဓိကသိရမည့်အချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုအချိန်တွင်ပင် ကောင်းကင်နိုင်ငံသားများ ဖြစ်ကြသည်ဆိုခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ တနေ့နေ့သွားကြမည်ဆိုသည့်အချက် မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နာမည်များသည် ယခု တွင်ပင် ထိုနေရာ၌ရေးထားသည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံ၏ နာမည်စာရင်း စာလိပ်ပေါ်၌ ကျွန်ုပ်တို့ရှိကြသည်။ ကျမ်းစာက “ငါတို့ကျင့်သော အကျင့်ဟူမူကား ကောင်းကင်ဘုံနှင့်စပ်ဆိုင်လျက်ရှိ၏” ဟု ပြောထားသည်။ (ဖိ ၃း၂၀)
ယခုသင်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံသားစာရင်းကို ဖတ်ကြည့်ပါက သခင်ယေရှုကို သိပြီးချစ်ကြသောသူများ၏ နာမည် အားလုံးသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ လက်ရှိနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ရေးထွင်းထားသည်ကို တွေ့ရပေမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အခက်အခဲမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်နှင့် စပ်ဆိုင်သူများဖြစ်ကြသော်လည်း ဖန်ဆင်းခြင်း အဟောင်းထဲ၌ ဆက်လက်အသက်ရှင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းကို “လက်ရှိ မကောင်းမှုများ ပြည့်လျက်ရှိသောကမ္ဘာ” ဟုပြောထားသည်။ ပရောဖက် ဟေရှာယသည် နာကျင်ဖွယ်ကောင်းသော အတွေ့အကြုံတခုကို မျှဝေပြောပြထားသည်။ ကျမ်းစာက “..ငါသည် ညစ်ညူးသောနှုတ်ခမ်းရှိသော လူမျိုးတွင်နေလျက်နှင့်..” ဟုပြောထား သည်။ (ဟေရှာ ၆း၅)
ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်အတိုင်းအတာတခုအထိ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်နေရမည်ဖြစ်သော်လည်း ဤကမ္ဘာသည် ကျွန်ုပ် တို့၏ အိမ်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့် ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်၌ ယခုတွင်ပင် အသက်ရှင် နေထိုင်နိုင်သည်။
ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်သည် မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်သော်လည်း ဤအရာသည် စစ်မှန်သည်။ ခရစ်တော် ၏ချီးမြောက်ခြင်းခံရပုံနှင့် ဆက်နွယ်၍ အရာအားလုံးကို လူများအမြင်မှ ဖုံးကွယ်ထားသော်လည်း ခရစ်တော်သည် ယခု အချိန်တွင်ပင် ဘုရားသခင်၏ အသစ်သောဖန်ဆင်ခြင်း၏ ဦးခေါင်းအနေဖြင့် ဘုန်းအသရေတော်ကို ဦးရစ်သရဖူ အနေဖြင့် ဆောင်းထားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်သည်။ ကျမ်းစာက “...ယခုမူကား ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် ချထားလျက်ရှိသည် ကို ငါတို့မမြင်ရကြသေး။ ယေရှုသည် .....ခေါင်းတော်၌ ဘုန်းအသရေပတ်ရစ်လျက်ရှိသည်ကို ငါတို့ မြင်ကြ၏” ဟု ဆိုထားသည်။ (ဟေဗြဲ ၂း၈-၉)
ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများစွာသည် ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်ကို နားမလည်ကြပါ။ ဤကမ္ဘာရှိ ပြသနာများကို ဖြေရှင်းရန်နှင့် အခြေအနေများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် ဘုရားသခင်ကို သူတို့သည် မြော်ကြည့်ကြသည်။ သို့သော် ဤအရာသည် ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်မဟုတ်ပါ။
ယခုတွင် ဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်အားလုံးသည် သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်ပေါ်တွင် အဓိကထားသည်။
ကမ္ဘာလောကသည် စာတန်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်။ သူသည် မျက်မြင်မရသော နောက်ကွယ်မှ အုပ်စိုး သူဖြစ်သည်။ သူ့ကို “ဤကမ္ဘာလောက၏ဘုရား” ဟုလည်းခေါ်ကြသည်။ (၂ကော ၄း၎)၊ ဘုရားသခင်နှင့် သားတော်အ တွက် နေရာမရှိသည့်အတွက် ဤကမ္ဘာလောကသည် ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်မှုအောက်၌ကျရောက်လျက်ရှိသည်။ တနေ့တွင် စာတန်၏ကမ္ဘာလောကသည် လုံးဝဖျက်ဆီးခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
ထမြောက်တော်မူသော ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်၏ ဦးစီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက လူသားယေရှုခရစ်တော်သည် “ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအမွေဆက်ခံသူ” ဟူ၍ပြောထားသည်။ ဘုရားသခင်၌ ရှိသမျှအရာအားလုံးကို ဆက်ခံရရှိသူဟု ဆိုလိုရင်းဖြစ်သည်။
တနေ့တွင် ခရစ်တော်သည် ကြီးစွာသောဘုန်းတန်ခိုးတော်ဖြင့် ပြန်လာမည်ဖြစ်ပြီး စကြ၀ဠာအတွင်းရှိ ဘုရား သခင်ပိုင်ဆိုင်သမျှ အရာအားလုံးကို ပြန်လည်ရယူမည်ဖြစ်သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းထင်ရှားသော ဘုရင်အနေ ဖြင့် အုပ်စိုးမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်အလာကို စောင့်မြော်နေကြသည်။ သူလာသောအခါ သူ၏ဘုန်းထင်ရှား သော ကိုယ်ခန္ဓာကဲ့သို့သော ထမြောက်သောကိုယ်ခန္ဓာကို ကျွန်ုပ်တို့အားပေးမည်ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာက “ငါတို့ကျင့်သော အကျင့်မူကား၊ ကောင်းကင်ဘုံနှင့်စပ်ဆိုင်လျက်ရှိ၏။ ကယ်တင်တော်မူသောအရှင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကောင်း ကင်ဘုံမှ ကြွလာတော်မူမည်ဟု ငါတို့သည် မြော်လင့်လျက်နေကြ၏။ ထိုသခင်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာကိုပင် မိမိ အောက်၌ နှိမ့်ချနိုင်တော်မူသော ပြုပြင်အားထုတ်ခြင်းအားဖြင့် ယုတ်ညံ့သောငါတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုပင်၊ ဘုန်းအသရေတော် နှင့်ပြည့်စုံသော ကိုယ်ခန္ဓာတော်၏နည်းတူဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ အသစ်ပြင်ဆင်တော်မူလတံ့။” ဟု ဆိုထားသည်။ (ဖိ ၃း၂၀-၂၁)
ခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်၏ မူလအစနှင့်ဦးစီးခေါင်းဆောင်အဖြစ် သေခြင်းမှထမြောက် သည်။ ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်များနှင့် ရည်ရွယ်ချက်အားလုံးသည် သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်ပေါ်တွင် အဓိကထားသည်။
ဘုရားသခင်သည် ယခုအခါခရစ်တော်ကိုနေရာအသစ်၌လူသစ်ဖြစ်စေသည်။ သူသည်ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်း အသစ်၏အစနှင့် ဦးစီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။
ယနေ့တွင် ယေရှုခရစ်တော်သည် အသက်ရှင်နေပါသလား? အသေအချာပင်အသက်ရှင်နေပါသည်၊ သို့ဖြစ်လျင် ဘယ်နေရာမှာ အသက်ရှင်နေသနည်း? သူသည် ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်၌ အသက်ရှင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်။
ခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၏ အလယ်ဗဟိုနှင့် ဦးစီးခေါင်းဆောင်အဖြစ် နေရာချထားခြင်းခံရသည်။ ဤသို့ ကောင်းကင်ဘုံဖွဲ့စည်းမှုစနစ်အား ပြန်လည်စီစဉ်နေရာချထားသည်ကို သိမြင်ရခြင်းမှာ အလွန်ပင်ကောင်းမြတ်ပေသည်။ ဤကြီးမြတ်သော အမှန်တရားသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ အခြေခံပင်ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် သေဆုံး၍ မြုပ်နှံခြင်း ခံရသည်။ သူသည် ဤကမ္ဘာနှင့်လုံးဝကွာခြားသော အခြေအနေအသစ်တခု၌ ထမြောက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော် (အတွင်း)၌ ရှိပါက သူရှိသည့်နေရာတွင် သူနှင့်အတူရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ိညာဉ်ရေးအရသေဆုံး၍ ဇာတိပကတိဘက်၌ရှိပြီး စာတန်၏မှောင်မိုက် နိုင်ငံထဲ၌ ရှိနေသည်။ ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်၌ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝိညာဉ်ရေးအရ အသက်ရှင်၍ ၀ိညာဉ်ပကတိဘက်၌ရှိပြီး ဘုရားသခင်သားတော်၏ နိုင်ငံအတွင်း၌ရှိနေမည်။ အဟောင်းတို့သည် ပြောင်းလဲ၍ အရာအားလုံးတို့သည် အသစ်ဖြစ်လာ ကြသည်။ ကျမ်းစာက “အလင်း၌နေသော သန့်ရှင်းသူတို့၏အမွေကို ငါတို့သည် ဆက်ဆံဝင်စားထိုက်မည်အကြောင်း၊ ကျေးဇူးပြုတော်မူ၏။ မှောက်မိုက်တန်ခိုးမှလည်း ငါတို့ကိုနှုတ်၍ ချစ်တော်မူသော သားတော်၏နိုင်ငံထဲသို့ သွင်းတော်မူ၏။” ဟုဆိုထားသည်။ (ကော ၁း၁၂-၁၃)
ဘုရားသခင်သည် ဤကမ္ဘာမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးနှုတ်၍ ဘယ်သို့ပို့ဆောင်ပေးသနည်း? ကောင်းကင်ဘုံလော? မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ချစ်စွာသောသားတော်၏နိုင်ငံအတွင်းသို့ ပို့ဆောင်ခြင်းခံရသည်ဟု ပြောထား သည်။ ယခုတွင်ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်နိုင်ငံအတွင်း၌ ရှိနေကြသည်။
သခင်ယေရှုသည် ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်၏ ကြီးမြတ်၍ ဘုန်ထင်ရှားသော ဦးစီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် ၏ ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်သည် ဝေးလှစွာသောအနာဂတ်ရှိ အရာတခုမဟုတ်ပါ။ ဤအရာသည် လက်ရှိအမှန်တကယ် ဖြစ်နေ သောအရာတခုဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်သည် ယခုတွင် ဘုရားသခင်၏ လက်ျာတော်ဘက်၌ အုပ်စိုးမင်းမူလျက်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုတွင်ပင် သူ၏ညွှန်ကြားလမ်းပြမှုအောက်၌ရှိနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူဤသို့ပြောပါ။ “ကျွန်ုပ် သည် နေရာအသစ်တခု၌ လူသစ်တယောက်ဖြစ်သည် ”
၁။ ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်တော်ကို အရာအားလုံးတို့၏သခင်ဖြစ်စေရုံမက ...
(က) “ဘုရားသခင်၏သားသမီးများ” ဆိုသောမိသားစုအသစ်၏ ဦးစီးခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်စေသည်။
(ခ) အာဒံမိသားစု၏ ဦးစီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်စေသည်။
၂။ ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မိသားစုအသစ်တခုရှိရုံမက ...
(က) ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်တခုလည်း သူ၌ရှိသည်။
၃။ ခရစ်တော်သည် ဂူသင်္ချိုင်းမှ ထမြောက်သောအခါ ...
(က) ဤလောက၏အစိတ်အပိုင်းတခုအနေဖြင့်သာ ထမြောက်၍ ကိုယ်ခန္ဓာအသစ်တခုကိုရရှိသည်။
(ခ) ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်ဖြစ်သော လုံးလုံးလျားလျားဝိညာဉ်ကမ္ဘာသစ်တခု၌ ထမြောက်သည်။
၄။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များကို ဤသို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်။
(က) ကျွန်ုပ်ကိုသနားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များကို လျစ်လျူရှုပေးသည်။
(ခ) ယှေုရခရစ်တော်၏ သွေးတော်အားဖြင့်။
၅။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်၏အပြစ်သားဇာတိပြသနာကို ဤသို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်။
(က) သာ၍ကောင်းသောလူတဦးဖြစ်လာစေရန် ကူညီပေးခြင်းအားဖြင့်၊
(ခ) ကားတိုင်ထက်ရှိ ခရစ်တော်အတွင်းသို့ ကျွန်ုပ်ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်၊
၆။ ခရစ်တော်၌ ဖြစ်ပျက်သမျှသည် ...
(က) ခရစ်တော်အတွင်း၌ရှိသော ကျွန်ုပ်တို့၌လည်း ဖြစ်ပျက်သည်။
(ခ) သူ၌သာဖြစ်ပျက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မဆိုင်ပါ။
၇။ ယုံကြည်သူတိုင်းသည် ...
(က) သာ၍ကောင်းသောလူတဦးဖြစ်လာသော်လည်း ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်း၌သာရှိနေသေးသည်။
(ခ) ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်၌ လူသစ်တယောက်ဖြစ်သည်။
၈။ ဖန်ဆင်းခြင်းအဟောင်းရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်တာအဟောင်းသည် ...
(က) ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်တော်နှင့်အတူ အသေခံခြင်းအားဖြင့် အဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်သည်။
(ခ) ကျွန်ုပ်တို့သေသောအခါ အဆုံးသတ်မည်။
၉။ ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းအသစ်၌ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသစ်သည် ကျွန်ုပ်တုိ့ဝိညာဉ်ရေးအရ ဒုတိယအကြိမ် မွေးခြင်းကိုခံသောအခါ စတင်အသက်ရှင်လာပြီး ...
(က) ကျွန်ုပ်တို့သေသောအခါ အဆုံးသတ်သွားမည်။
၁၀။ ယခုအခါတွင် ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်အားလုံးသည် အောက်ပါအချက်ပေါ်တွင် အဓိကထားသည်။
(ခ) ဤကမ္ဘာကိုသာ၍ ကောင်းသောနေရာဖြစ်လာစေရန် အပေါ်၌။
ပြုစုသူများ။ အန်ဒရူး၊ ဖိလစ် နှင့် ရဲလင်းထွန်း(အင်းစိန်)